Semalt: Imeyili Kutengesa Pasina Back Hat Techniques
Zvakakosha kuti urege kuyambuka mutsara wekatsva kana zvasvika pakushambadzira kwemaimeri. Dzimwe nyanzvi dzeEOO dzakaisa mitemo nemamiriro ezvinhu ekuita kuti zviitike, asi vamwe vese vasina ruzivo vanotengesa SEO havazivi kunyange kuti vangatora sei mabhizinesi avo kune rimwe rinotevera. Heano aya mazano mashanu anopiwa naIgor Gamanenko, the Semalt Mutengi Wakabudirira Mutengi, waunofanirwa kutakura mupfungwa kuti uve nechokwadi chekuchengeteka kwako paIndaneti.
Zvinotenderwa kuti udzivise craigslist kana uchida kubudirira kuburikidza neInternet - istick 50w ðºð½ð¾ð¿ðºð°. Craigslist chinhu chinokuidza kune vatsva vemaoko SEO nyanzvi uye vatengesi ve email, asi vane boka rezvemitongi vanogona kukukwevedza kudare kana iwe ukawanikwa uchibatanidzwa mune zvimwe zvinhu zvisiri pamutemo.
Chero bedzi iwe uchikwanisa kuunza mamiriyoni ezvinyorwa zvakajeka uye une dzakawanda dzeIndaneti, haufaniri kumbomhanyira craigslist nokuti vanogona kukuudza iwe injini dzekutsvaga . Iwe unofanirwa kufara kana iwe wakagadzirisa nzvimbo yako yepaiti pasina kubatanidzwa mune zvimwe zvinhu zvisiri pamutemo.
Bvisa vanhu vasingazivikanwi
Munhu asingazivikanwe anogona kukuvadza mukurumbira wako paIndaneti.Asi paunenge uchitengesa maimeri, unofanirwa kuva nechokwadi chokuti unozvidzivirira uye unovhara ma IP adresses nokukurumidza. e-mail nokuti ivo varipo kuti vape ruzivo rwenyu pachavo uye kuparadza mapeji enyu ezvehuwandu hwemagariro evanhu.
Tora mahombekombe kubva kune radar
Hazvingave zvisina kunaka kutaura kuti kukumbira kutumira mawandisi emaimeri kubva kumaseva asina kuzivikanwa kana nyika dzakadai seIndia kana kuRussia zvinogona kukugadzirisa matambudziko. Ndicho chikonzero iwe usingafaniri kushandisa IP mazita edzi nyika iyo uchikutumira maimeri kune vatengi vako kana boka guru revanhu. Iwe unofanirwa kutora offshore kubva kune radar nokuvanza IP yako kuitira kuti parege kuva neanogona kukunyengera kana kukubvumira chero ipi zvayo.
Kunyanya Kunetseka (VPS)
Zvakanaka kushandisa svondo yeVPS kana server yakatsaurirwa maererano nezvinodiwa. Munenge vanhu vose mune zvebhizimisi uye vese vanoita zvekutengeserana, pamwe chete nevatengesi vedijititi, vanoshandisa VPS kana mavhareji akazvitsaurira pavanotumira maimeri nekuda kwezvikonzero zvekusimudzira. Kana iwe uri mumwe wavo, haufaniri kubatanidzwa mumusika wekutsvaga email yekutengesa sezvo ichaita kuti iwe nebhizimisi rako muve nezvinetso paIndaneti.
Haufaniri kukanganwa kuti hutsotsi hwekutsvaga email yehandi inoshanda kwemazuva mashoma chete. Asi pamwe chete naro, haugoni kuunza chero nzira uye haugone kuwana zvakawanda kubva mubhizinesi rako rekuInternet. Iro tsvina ye email maitiro ekutengesa haasi akavimbika uye haigone kuvimbisa kubudirira. Ndicho chikonzero iwe unofanirwa kubhadhara zvakanakisisa kumuchena weiyo email marketing uye unyanzvi hwemagariro evanhu. Zvinotora nguva, asi zviitiko zvinonakidza uye zvehupenyu hwose. Kune mabhizimisi maduku uye makuru, zvinotenderwa kusarudza maitiro machena, uye haufaniri kumboyambuka mutsara wekasi mutsva kana iwe usingadi kuvharirwa paIndaneti.